တရုတ်လမ်းပခုံးပျဉ်ပြားတင်ပို့မှုနှင့်ကုန်ပစ္စည်း | အမြဲစိမ်း
Chenille ပေးစာ / အထိမ်းအမှတ်တွေကို
ယက်တံဆိပ် / တံဆိပ်
3rd ။ ညီထပ်, Huihuang အဆောက်အအုံ, Chaxing လမ်း, Chashan မြို့, Dongguan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-769-87036875
E-mail ကို: sales@egbadges.com
(သူတို့မှာလည်းလူသိများကြသည်အဖြစ်သို့မဟုတ်ပခုံးဆလိုက်များနှင့်ရာထူးဆလိုက်) စိတ်တိုင်းကျ epaulettes ပန်းထိုး, ယူနီဖောင်းတစ်ဦးကွဲပြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့ဥပဒေ, ပြင်ဆင်ချက်အဆောက်အဦ, လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီများ, လူနာတင်ယာဉ်ဝန်ဆောင်မှု, မီးဌာနများ, တက္ကစီကုမ္ပဏီများသည်အဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်မာနထောင်လွှားနှင့်အတူဝတ်ဆင်နေကြသည်, လေကြောင်းလိုင်းနှင့်များစွာသောပိုပြီး! Epaulettes ထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီလိုဂို, နှုတ်ကပတ်တော်ကို "လုံခြုံရေး" သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ရာထူးသို့မဟုတ်ရပ်တည်မှုအဖြစ်မက်ဆေ့ခ်ျဆကျသှယျနိုငျသညျ။ အမြဲစိမ်းတံဆိပ်ကိုအသုံးပြုသည် ...
Min.Order အရေအတွက်: 100 ဦး Piece / ပိုငျးပိုငျး
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: တစ်လလျှင် 10000 Piece / ပိုငျးပိုငျး
(သူတို့မှာလည်းလူသိများကြသည်အဖြစ်သို့မဟုတ်ပခုံးဆလိုက်များနှင့်ရာထူးဆလိုက်) စိတ်တိုင်းကျ epaulettes ပန်းထိုး, ယူနီဖောင်းတစ်ဦးကွဲပြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့ဥပဒေ, ပြင်ဆင်ချက်အဆောက်အဦ, လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီများ, လူနာတင်ယာဉ်ဝန်ဆောင်မှု, မီးဌာနများ, တက္ကစီကုမ္ပဏီများသည်အဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်မာနထောင်လွှားနှင့်အတူဝတ်ဆင်နေကြသည်, လေကြောင်းလိုင်းနှင့်များစွာသောပိုပြီး! Epaulettes ထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီလိုဂို, နှုတ်ကပတ်တော်ကို "လုံခြုံရေး" သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းအတွင်းတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ရာထူးသို့မဟုတ်ရပ်တည်မှုအဖြစ်မက်ဆေ့ခ်ျဆကျသှယျနိုငျသညျ။
အမြဲစိမ်းတံဆိပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ epaulettes ထုတ်လုပ်ရန်သာအရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးပစ္စည်းများနဲ့လက်ရာအသုံးပြုသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံးစံ epaulettes များ၏အများစုငါတို့သည်လည်းယက် epaulettes ထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်အလွန်ချောအသေးစိတ်များအတွက်သို့သော်တစ်ဦးအခြေစိုက်စခန်းထည်ပေါ်သို့ပန်းထိုးနေကြသည်။
ယခင်: ပခုံးပျဉ်ပြား epaulette
နောက်တစ်ခု: ပခုံး epaulette ဖက်ရှင်
ပခုံး epaulette ဖက်ရှင်
© Copyright - 2010-2019: အားလုံးအခွင့်အရေး။ သိကောင်းစရာများ - Featured ထုတ်ကုန်များ - မြေပုံအညွှန်း - မိုဘိုင်းဆိုက်ကို
Chenille ပေးစာ Patch ကို, Chenille Patch ပေးစာ, ချိတ်, Loop ယက်တံဆိပ် , Chenille Varsity ပေးစာ T က Patch, Chenille Varsity ပေးစာ, ချယ်လှယ်သောတံဆိပ်, အားလုံးထုတ်ကုန်များ- 粤ICP备18108880号-1